Okudumile ku-abasha amakhosazana onodoli: Elsa ka "Cold Inhliziyo"
Kunakeni lokho ezitolo ithengiswe okwamanje onodoli enhle. U-Elsa - umlingisi ikhathuni ethandwa - uvele cishe ngokushesha ngemva kokuba ikhishwe esikrinini. Ochwepheshe ithoyizi umkhakha Kwasheshe kangakanani-ke kuyokwenziwa ithengiswe. Yiqiniso, ngenxa izinhlamvu ozithandayo ihlanganise kahle doll. U-Elsa uye undab 'uzekwayo amantombazane amaningi. Phela, bakholelwa izinto ezihlukahlukene ngokuqondene abulawe yayo. Ngakho-ke, ingane ngayinye bazokwazi ukuthola ncamashi lokho ekudingayo.
Ikhwalithi ephezulu kanye ukubukeka elikhangayo doll. U-Elsa - ithoyizi amaphupho
Ngakho ofuna ukuyithenga indodakazi yakhe, umzukulu, nomshana noma udadewabo omncane ithoyizi ezinhle. Yiqiniso, le ntombazane onodoli kukhona ukhetho ephelele. U-Elsa kusukela ukuqoqwa Disney balingisi uzongithanda ingane yakho. Beautiful inkosazana akuyona kuphela emangalisayo ngenxa yobuhle balo. Ikhwalithi ephezulu Elsa onodoli bayokwazisa kanye nabantu abadala.
Kuvele ithopholoji ngqo Heroine
Lokhu yobude obugcwele Disney ifilimu yasheshe eziningi abalandeli kancane. Ngendlela efanayo njengoba doll Elsa. "Cold Inhliziyo" nezinhlamvu zakhe ungashiyi izingane ngabandayo. Bathanda ukudlala nabo. Futhi njengoba unodoli Elsa lifana ncamashi Heroine, kuba ezithakazelisayo nakakhulu. Futhi kwekhanda, futhi izici zobuso, futhi ngendlela emangalisayo enhle abasha inkosazana ngubo ukuwugcina ngokuphelele, okuyinto isithombe sopopayi.
Yenza lab 'onodoli siqukethe plastic imvelo. Outfit ithungwe avela phezulu impahla izinga. izinwele Beautiful blonde sibekwa kwekhanda okukhulu. Inhloko futhi isibambo lemilenze ogibele kokuhlanganisayo, ngakho doll kungathatha izikhundla eziningi waphendukela ikhanda lakho. Kafushane, ukudlala Elsa - Kujabulisa ngempela. kinoigrushki Beautiful ngisho nasemininingwaneni emincane kakhulu kuthiwa isithombe okuphindiwe uhlamvu abathandwa ifilimu abadumile opopayi.
A isipho ephelele amantombazane
Ikakhulukazi zokuhamba kanye samanje ukuba yezingane party unodoli Elsa. "Cold Inhliziyo" - ikhathuni, ngokushesha okukhulu iwine ukuqashelwa izingane. Ngakho-ke, ithoyizi ezifana futhi agcizelele noma iyiphi intombazane ngokoqobo shazi. Melana ukuthenga isipho esinjalo kunzima, futhi abazali ngokwabo.
unodoli esinyakazayo ngakolunye kokuhlanganisayo nge izingxenye zomzimba, okuyinto has a ukufana ne Heroine ikhathuni, crazy like kwentombazanyana ezihambayo. Beautiful ingubo, amehlo amakhulu, eluka uqweqwe isikhumba ugodo ... Le unodoli - a wobuhle bangempela!
Cabanga yonke imininingwane
Futhi manje kabanzi mayelana ngamunye isici ngabanye. Asiqale ne izinwele. Bang onodoli (labo ngalo) sengathi varnished - nzima futhi igcina ezakheke ngayo. Eluka kakhulu esifanayo onomuzwa soft kakhulu. It unamathele esebenzisa bands zenjoloba obala sobunxele.
Njengoba yokuthunga ingubo, ke lineluphu limnandi, ithungwe ibe yaseZimbabwe ezimbalwa ezindaweni ezintathu. Badinga waklebhula. Kukhona ezimbalwa amaphutha amancane. Gqoka kancane unodoli omncanyana esifubeni emahlombe. Ngaphezu kwalokho, raincoat esobala, ehlotshiswe licwebezele futhi eqhwa, kancane esishwabene ebhokisini. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze umusi, njengoba ngokusobala ayikwazi ironed. On imilenze isiphungumangathi ezigugile izicathulo blue, i-ballet emafulethini, kanye IsiXhosa, livikeleke esebenzisa bands zenjoloba okusobala.
Futhi zokugcina lokususa encane. Dolls (Elsa Anna - amabili) abe imilenze kancane oluyisigwegwe. Ngakho uma uphakamisa dress ngenhla kwamadolo ... Ngokuvamile, kukhona icala elincane. Doll ke ngempela eqolo, ngakho amaphutha ekusebenzeni kwakhe nje akwamukeleki! Kodwa noma kunjalo, plus ngisho nangaphezulu, kodwa ukuthenga noma cha ukuthenga ingane yakhe - abazali ke sika.
Hlabelelelani kanye doll
Futhi izingane eziningi zokudala kukhona unodoli ukucula Elsa! Ukuhlabelela kanye "intombi" yakhe imvuthu badinga kuphela uthinte njengentelezi magic, awulethe isandla ku-Elsa umbhobho. ngokushesha Doll uqala ingoma ebizwa ngokuthi "Ake uhambe bese ukhohlwa". Ingane nayo nganoma yisiphi isikhathi ukuze alethe i-microphone bese uqhubeke ukucula. Kuyinto izingane esijabulisayo. Ungakwazi ukucula kanye Elsa ngisho ezimbili. Vele ungakhohlwa ukuthenga amabhethri!
Futhi into eyodwa ngaphezulu. Khumbula futhi ukuthi kule ndawo okhalweni ngemuva doll encane flat okusobala plastic cap. Ngaphambi kokuthi usebenzise kufanele ukuyikhipha igebe encane. Kungenjalo umdlalo kuyoba nje ucezu umculo, ngihubele Elsa ngeke polkupleta. Uma isuse - uzozwa ngempela kukho eside.
Ngakho, ungaqiniseka ukuthi ukuthenga unodoli Elsa, uyakuyakhela isipho esikhulu. imvuthu zenjabulo nje angenamkhawulo, njengoba kwenza eyakho. Phela, nasenjabulweni yezingane zethu - lena injabulo yethu! Futhi ngisho noma ingane ikhula ayeke ukudlala unodoli, kungaba nje ukuhlobisa etafuleni noma eshalofini ezisenkumbulweni eyakhula ezikude.
Isimanga lokuzalwa kwengane noma New Year
Ukumodela eqenjini amadala. Modeling enkulisa
Izifiso kanye nezidingo zabantu
Camphor utshwala. Kusetshenziswa imithi futhi Cosmetology
Indlela ukulungisa okuphakela amandla?